ဗီလိန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဗီလိန်
Posted by ဇီဇီ on Apr 3, 2013 in Creative Writing, Moderator, My Dear Diary | 45 comments
“”ဟဲ့။ ဟဲ့။ ငါပြောတာ အဲ့တစ်ယောက်၊ အဲ့ တစ်ယောက်””
သူမ စကားသံအလန့်တကြားမှာ အချဉ်ပေါင်းသည်ထံ စိုက်နေတဲ့ မျက်လုံးများ ဟိုကြည့်၊ ဒီကြည့်ဖြစ်ကုန်သည်။ ဝါလေးရယ်၊ ဆွေရယ်၊ ပန်းကလေးရယ်၊ သူမရယ် ကျောင်းက အချဉ်ပေါင်းသည်ဆီမှာ ဝိုင်းနေခိုက်ဖြစ်သည်။
“”ဟိုမှာလေ။ ပုဆိုးလေးနဲ့ ရှမ်းလွယ်အိတ်လေးနဲ့ဟာ””
“”ဪ စိုင်းလင်း ကိုပြောတာလား။ အဲဒါ ငါတို့ ဂျီတီအိုင်တက်တုန်းက သူငယ်ချင်း အရင်းကြီး””
ဆွေ စကားအဆုံးမှ ဝါလေး က……..
“”နင် ပြောတဲ့ ချစ်စရာလေး ဆိုတာ စိုင်းလင်းကိုပြောတာလား””
“”အင်းလေ၊ ကြည့်ပါ့လား၊ Westlife က Brian လို ရုပ်မျိုးလေး။ ရီလိုက်ရင်ပိုတူသေး။ တော်တော် အပြစ်ကင်းတယ်””
သူမ စကား အဆုံး ဆွေ နဲ့ ဝါလေး တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက် ကြည့်လိုက်ကြသည်။ ပန်းကလေးက ခုထိဘာမှ ဝင်မပြော။
နာမည်နဲ့လိုက်အောင် ပန်းကလေးလို လှပြီး အေးဆေး စိတ်ပျော့လွန်းလို့ အနားခေါ်ထားရတဲ့ သူမ အချစ်တော် သူငယ်ချင်းကောင်မလေးဖြစ်၏။
ခဏနေတော့ ဆွေဆီ မှ….
“”မိတ်ဆက်ပေးရမလား”” ဟူသော မေးသံထွက်လာသည်။
“မလိုပါဘူးဟ။ အပြစ်ကင်းတဲ့ ရုပ်က ဘယ်လိုတုန်းဆိုတာ စကားစပ်မိလို့ ပြောရင်း ပြတာပါ။ ငါ မခင်ချင်သေးပါဘူး။” ဟု ပြန်ပြောလိုက်ရသည်။
ထိုအခါမှ ဝါလေးက “”မိအိုစီတို့ ဘဝင်မြင့်မှာမို့မပြောပဲထားထားတာ။ ကံကောင်းချင်တော့ တွေ့လည်းတွေ့တတ်တယ်”” တဲ့။
သူမ နားမလည် ကြောင်တောင်တောင် ကြည့်မိတော့ “”ဟုတ်တယ်။ သူက နင်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခိုင်းနေတာ၊ ချစ်စရာလေးမို့လို့တဲ့””။
ဝါလေး စကားအဆုံး နည်းနည်း ကျေနပ်သွားစိတ်နဲ့……
“”တကယ်လား။ အဲဒါဆိုလည်း စောစောပြောရောပေါ့ကွယ်။ အော်တို လက်မှတ်လေးဘာလေး ထိုးပေးရဦးမလားဟင်””
“”မိခိုင် အစုတ်မလုတ်မ၊ ဘဝင်မ”” စုံနေအောင် ဆဲသံတွေ ထွက်လာသည်။
ဒီလိုနဲ့ စိုင်းလင်း ဆိုသော အင်မတန် ယဉ်ကျေးရည်မွန်သော သူငယ်ချင်းလေးတစ်ယောက် အဖွဲ့ထဲ ရောက်လာသည်။ သူမတို့ ဆိုးသမျှ ဒဏ်ကို ပြုံးပြုံးနဲ့ သည်းခံလို့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အနေနဲ့လည်း သံယောဇဉ်ပိုမိသည်။ နောက်ပြီး သူမ ကိုယ်တိုင် ကလွဲ၍ဘယ်သူနဲ့မှ စိတ်မချသော ပန်းကလေး တာဝန်တွေကိုတော့ စိုင်းလင်းကို စိတ်ချလက်ချပေးမိပြန်သည်။
ပန်းကလေးရဲ့ တုံ့ဆိုင်းဆိုင်း စကားသံအဆုံး သူမ လန့်သွားကာ..
“ဘာလဲ။ ဘာလဲ၊ ပန်းကလေး ဘာဖြစ်လဲ” လို့ မေးလိုက်မိသည်။
“ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ မေးမို့ဟာကို။ ဟိုဟာလေ”
“”ဘယ်ဟာတုန်း၊ ဘယ်သူ စာပေးလို့တုန်း၊ စကားလိုက်ပြောခံရသလား၊ ဘယ်သူ ဖုန်းခေါ်တာလဲ”” ဖြစ်နိုင်ချေတွေတန်းစီမေးလိုက်သည်။
““ဟိုဟာ၊ နင် စိုင်းလင်းအပေါ် ဘယ်လို သဘောထားသေးတုန်းလို့” ”
“”ဪ။ ဒါများ ပန်းကလေးရယ်။ ဘာများလဲလို့။ ဒီလိုပဲလေ။ ခင်တယ်၊ ချစ်တယ်လေ။ ဒါပဲလေ။ အဲ ချစ်တယ်ဆိုလို့မလန့်နဲ့နော်၊ ငါ ဒီ စကားကို အပေါ့နဲ့ အလေး ၂ မျိုးသုံးတတ်တာ.. ဒါက အပေါ့။””
အဲဒီတော့မှ ပန်းကလေး မျက်နှာလေး ကြည်ကာ သူမ ခါးကို လာဖက်ပြီး ပြောလာသည်။
“”သိပါတယ်။ ဒါမဲ့။ မဆူနဲ့နော်။ ငါ သူ့ကို ချစ်သလိုပဲ။ အဲလို မဖြစ်ဖူးဘူး။ အရင်က””
သူမ ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်အေးစွာ…..
“”သူကိုတော့ ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးလေ။ ဟိုချာတိတ်မတွေနဲ့လည်း အရင်းကြီးဆိုတော့၊ ကန့်ကွက်စရာမရှိ”” ပြန်ပြောမိ၏။
ဒီလိုနဲ့ အရင်ကထက် ပိုပြီး သူတို့ ၂ ယောက်ကို ဦးစားပေးကာ အတူထားသည်။
သူငယ်ချင်းတွေကလည်း ရိပ်မိစွာ ဝိုင်း စ တော့ သူမကိုယ်တိုင် ချစ်သော ပန်းကလေး ကိုယ်စား ဝမ်းသာနေရသည်။ သူတို့ ၂ ယောက်ကြည့်ရတာ အေးချမ်းသည်ကိုး။
ထို အချိန်က သူမ မှာ ချစ်ရသူ သူငယ်ချင်းကြီးနဲ့ ရန်ပွဲတွေ တချိန်းချိန်းနဲ့ မအေးချမ်းနိုင်။
သူမတွင် မတည့်အတူနေ ချစ်ရသော သူငယ်ချင်း ဒေါ်နယ်(လ) ဟူသော လူဆိုးလေး က အနားမှာရှိလေသည်။
ဒါတွေ သူတို့ အသိပေပဲ။
ထိုနေ့က လည်း ကင်တင်းမှာ ဘာမဟုတ်သော အကြောင်းနဲ့ ငြင်းခုန်မိပြီး စိတ်မောစွာ ကျောင်းကနေ အိမ်ကို ပြန်မယ် အလုပ် ကျောင်းဆင်းချိန်မဟုတ်လို့ ကျောင်းကားက မရှိ။
ရုတ်တရက် စိုင်းလင်းက သူ လိုက်ပို့မယ်ဆိုလာတော့ လက်ခံကာ အိမ်ပြန်လာခဲ့သည်။
လမ်းမှာ စိုင်းလင်း က…
“”မိုင်ခိ၊ နင် စိတ်မပင်ပန်းဘူးလားဟာ။ ဒေါသလေးလျှော့ပါဦး။ နင်တို့ ၂ ယောက် တစ်ခါ ရန်ဖြစ်တိုင်း ငါ ကြည့်ပြီး နင့်ကို သိပ်သနားတာပဲ””
“”ဟင်၊ ငါ့ ကို။ သနားတယ်။ ဟုတ်လား။ နင်တစ်ယောက်ပဲ ပြောဖူးသေးတယ်””
“”အင်း၊ နင်က စိတ်မာချင်ယောင်ဆောင်ထားတာ၊ နင် ဝမ်းနည်းရင် နင် ဘယ်လောက်ဟန်ဆောင်ထားထား ငါ့ အမြင်မှာ အရမ်းသိသာတယ်””
သူမ စိတ်ထဲတော့ စိုင်းလင်း အမြင်တစ်ဝက်လောက် ဟိုမှာ ရလိုက်ပါတော့ လို့သာ ဒေါသထွက်ထွက် တွေးမိသည်။
သူမ အတွေးနဲ့ သူမ နုတ်ဆိတ်နေခိုက် သူ ဆက်ပြောသည်။
“”နောက်ပြီး နင်က ဘာကိစ္စ ပန်းကလေးကို ငါ့ဘက်အတင်းတွန်းနေတာတုန်း၊ ငါ သူ့ကို စိတ်မဝင်စားဘူး””
“ဘာရယ်။ ပန်းကလေးက သူ့မေဂျာမှာ Queen ဟ။ လူကြိုက်ဒီလောက်များတာ။ နင် ပဲ အလိုလိုက်လွန်းလို့ ငါ က အဆင်ပြေပြီမှတ်နေတာ””
“ငါ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ခါးခါးသီးသီး ငြင်းမလဲဟ။ ဒီ အဖွဲ့လေးထဲ ဝင်ချင်လွန်းလို့ ဝင်လာရပြီးမှ ပြန်ထွက်မသွားချင်ဘူး။ ပြီးတော့ ငါ ဒီ ဖွဲ့ထဲ ကို ရောက်လာတဲ့ အကြောင်းအရင်း က ရှိပြီးသားပါဟ””
နားထောင်ရင်း သူမ စိတ်တွေ ထင့်လာသည်။ မဟုတ်ပါစေနဲ့ လို့ ကြိတ်ဆုတောင်းရင်း အာရုံလွှဲရတော့မည်ဟု သတိရလိုက်သည်။
“”ဪ၊ မသိပါဘူးဟာ။ ငါ လဲ ငါ့ ကိစ္စ၊ ငါ့ ပြသနာနဲ့ ဆိုတော့ နင် တို့ ကို အသေးစိတ်တော့ ဘယ်သိနိုင်တော့မလဲ။””
“”အေး။ နင့် အာရုံတွေ အဲဒီကောင် ဆီ ရောက်လေ၊ ငါ အဲဒီကောင်ကိုသတ်ချင်လေပဲ””
သူမ စိတ်ထဲ ဘုရားတလိုက်မိသည်။ နူးညံ့လွန်းသော သူငယ်ချင်းဆီက ဒီ စကားကြားလိုက်တာ သူမ နား ကို မ ယုံနိုင်အောင်ပင်။
“”အာ။ ဘာမှ လျှောက်မပြောနဲ့တော့ စိုင်း၊ တော်တော့။ ဒီ စကားတွေလဲ ပန်းကလေး ရှေ့ မပြောနဲ့နော်။”” ဒီလောက်နဲ့ပဲ စကားစဖြတ်ကာ နေလိုက်ရသည်။
သူမ စိတ်ထဲမှာတော့ ဒီ အခြေအနေကို ကျောင်းပြီးသည်အထိ ထိမ်းသိမ်းနိုင်မယ် မျှော်လင့်ခဲ့သည်။
အနေအထိုင်၊ အပြောအဆိုက အစ ဆင်ခြင်ဖို့ စဉ်းစားရသည်။ နောက်တစ်ချက်က ဒေါ်နယ်(လ)။
“”ခိုင်၊ နင်ပြောတော့ စိုင်းလင်းက ပန်းကလေးနဲ့ ဆို။ ဒါပေမဲ့ ဒီ ကောင့် အချိုးကို ကြည့်မရချင်ဘူး။ နင့် ကို ဂရုတစိုက်တွေ လိုက်ပြလွန်းနေတယ်။””
“”ကြည့်မရ မကြည့်နဲ့ပေါ့။ ဘာမှ ငါ့ကိုလာမပြောနဲ့။ ငါ နဲ့ သူနဲ့လည်း ဘာမှ မဆိုင်သလို နင်လည်း ငါ့ ကို ဒီ ကိစ္စ နဲ့ ဘာမှ ပြောခွင့်မရှိသေးဘူး””
ဒီလိုတွေနဲ့ စာမေးပွဲတွင်း သတ်ကြရပြန်သည်။ မခေါ်ကြတော့ပြန်။
သူမ စိတ်တင်းကာ စာမေးပွဲ အပြီး သင်္ကြန်အတွက် စီစဉ်ရပြန်တော့ ပန်းကလေးက တစ်စခန်းထ၏။
စိုင်းလင်း ရှိသော ရေကစားမဏ္ဓပ်မှာ ကစားချင်လို့ တဲ့။
စိတ်ထဲမှာတော့ ဒီ လောက် အချိန်အကြာကြီး ထိမ်းနိုင်တဲ့အခြေအနေ ဒီ ၃ ရက် ရနိုင်ပါတယ်လို့ ပဲ တွက်ဆကာ လက်ခံလိုက်မိသည်။
အကျရက်၊ အကြပ်ရက်တွေ သူတို့ ၂ ယောက်ကို လွှတ်ထားပြီး သူမ ရှောင်နိုင်သမျှ ရှောင်နေခဲ့တာက အမှားလား။
နောက်ဆုံး အတက်နေ့မှာ စကားပြောခွင့်ပေးလိုက်တာက အမှားလား မသိတော့ပေ။
အတက်နေ့၊ ရေကစားနားချိန် သူမ ခေါက်ဆွဲစားနေရာသို့ စိုင်းလင်းရောက်လာသည်။ သူမ ဟန်မပျက် ပြုံးပြလိုက်တော့ အနားမှာ လာထိုင်ပြီး….
““မိုင်ခိ၊ နင် ငါ့ ကို ရှောင်နေစရာမလိုတော့ ဘူး၊ ငါ ပန်းကလေးကို ဝန်ခံလိုက်ပြီ။
ဝန်ခံချင်တဲ့ တစ်ယောက်က နားမထောင်တော့ ငါ သူ့ကို ပဲ ဝန်ခံလိုက်ပြီ။
နင် သိပြီးသားမို့ ငါ့ကို ရှောင်နေတာလဲ ပြောလိုက်တယ်။ ငါ ဒီ ထက်လည်း မမြိုသိပ်နိုင်တော့ဘူး။ ဟန်လည်းမဆောင်ချင်တော့ဘူး။””
သူမ အံ့ဩတကြီး ကြည့်နေရာက သတိဝင်လာပြီး ပထမဆုံး သိလိုက်တာက ဒေါသနဲ့ အတူ လက်ထဲက ခေါက်ဆွဲ အပူနဲ့ စိုင်းလင်းကို ပက်မိလိုက်ပြီဖြစ်သည်။
နောက်တော့ ဘာစကားမှ မဆက်နိုင်အောင်ကို ငယ်ထိပ်အထိ သွေးတိုးအောင် ဖြစ်နေတဲ့ ဒေါသကို အရင်ထိမ်းနေရ၏။ လူကြားထဲ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်သွားလောက်အောင် ဖြစ်သွားတဲ့ သူမ ကိုယ်ကိုယ် လည်း ဒေါသဖြစ်မိ၏။
ပြောရက်လိုက်တာ။ ပန်းကလေး ဘယ်လိုခံစားရမလဲ။ သူ စိတ်က နုနုလေး။ သူမကိုရော ဘယ်လိုထင်မှာပါလိမ့်။ အတွေးတွေနဲ့ ရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီး….
“စိုင်းလင်း နင် ရက်စက်လိုက်တာ။ ဒီနေ့လေးတစ်နေ့ကို ဘာလို့ မထိမ်းနိုင်တာလဲ။ နက်ဖြန်ပဲ ကိုယ့်ဒေသကိုယ်ပြန်ကြရတော့မှာ။ ငါ သူကို စိတ်မထိခိုက်စေချင်တာ နင် မသိဘူးလား” လို့ မေးမိလိုက်သည်။
“”ဟုတ်တယ်။ အဲဒီလိုပြန်ရတော့မှာမို့ ပြောချင်တာတွေပြောလိုက်တာ။ ငါ နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာတဲ့အခါ နင့် တစ်ယောက်တည်း ဆီ ကို ပဲ လာချင်တယ်။ ဘယ်သူကိုမှ ဟန်ဆောင်ပြီး မလိုက်လျောနိုင်တော့ဘူး။
နင် မတရားဘူး နင်သိလား။””
စိုင်းလင်းရဲ့ စကား အဆုံးမှာ ပဲ သူမ ဆုံးဖြတ်ချက် အလိုလိုကျသွားသည်။
ငါ စိတ်ထဲမှာ ငါ့ ချစ်သူရှိတယ်။
သူမရှိဘူးဆိုတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ရင်ကို ပန်းကလေး ကို စွန့်လွှတ်ပြီးမှ ရမဲ့ ချစ်သူမျိုးလည်း ငါ မရွေးချယ်ဘူး။ အဲဒီတော့ ငါ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ နင့် ကို စွန့်လွှတ်ဖို့ပဲ။
နောင်တစ်ချိန် နင်တို့ ၂ ယောက် ပြန်ပတ်သက်နိုင်မှသာ ငါ့ကို ဆက်သွယ်တော့။ ငါ့ကို မတရားဘူးမကလို့ ဘာပြောပြော။ ငါ ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချဖြစ်အောင် နင် တွန်းအားပေးတယ်လို့မှတ်လိုက်။ “”
ပြော အပြီး ပန်းကလေး ရှိနိုင်မဲ့ နေရာသို့ လှမ်းနေတဲ့ သူမ ခြေလှမ်းများ လေးပင်ပင်။
သူမ နဲ့ ပန်းကလေး နဂို အခြေအနေပြန်ရောက်ဖို့ ပန်းကလေး ယုံကြည်မှုကို ပြန်ရဖို့ သူမကြိုးစားခဲ့ရတာ ၆ နှစ်။
ဒီ ဇာတ်လမ်းမှာ ဗီလိန် တစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့ဖို့ ဆိုလျှင် ၆ နှစ်မပြောနဲ့ နှစ် ၆ဝ သက်သေပြ ဆိုလည်း သူမ ဝန်လေးမည်မဟုတ်ပါ။
အမြဲတမ်း နောက်ကောက် ကျတတ်သူမို့
လာလေရော့ ဆိုပြီး …
အရင်ဆုံး နေရာ လာဦးထားဒါ .. ဟီးးး
((ဒါတောင် ခု ရေးနေဒုံး သူညား ဦးတွားရင် ဒွတ်ခ))
လာနေရာဦးရအောင် ရပ်ကွက်ထဲ ပိတ်ကားထောင် ရုပ်ရှင်ပြတယ်မှတ်နေလားဟင်။
သူဟာသူ ညံ့လို့ နောက်ကောက်ကျတာကို ……
မိုင်ခိ က ဘာလို့ ဗီလိန် ဖြစ်ရမှာတုန်း။
တစ်ခါတစ်ခါ တော့လဲ တစ်ချို့က အလွယ်ရတာထက် ခက်တာကိုမှ ပိုကြိုက်တတ်သလားဘဲ။
ကျနော်က အဲလေ သူမက သဘောကျသလေး ဘာလေး အာချောင်ခဲ့တာကိုး အရီးရဲ့။
ပြသနာဖြစ်တော့ အဲဒါကြီးနဲ့ တွဲထင်ကြတာပေါ့။
ကိုယ့်က ပေါ့ပေါ့လေးပေမဲ့ အလေး အနက်ထားတဲ့ လူတွေက ထားကြတယ်။
ပြင်မယ်ပြင်မယ်ဆိုတာ စဉ်းစားနေတာ ၁ဝ စုနှစ်ကျော်ပေါ့။
ဒါမဲ့ ချာလီလေ့လာထားတဲ့ ဘာသာရပ်ကို သိတုန်းက အဲ့သူငယ်ချင်းကို သွားသတိရလိုက်သေး။
ဟုတ်ကဲ့ ဝက်စလိုက်ဗ်က ဘရိုင်ယန်ဆိုလား အဲ့လာတေ့ကတည်းက
ဆက်မဖတ်တော့တာ စိတ်မချိပါနဲ့ ခည..
အနှီ ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်လေးဒွေနာမည်မြင်ရင် အော်ဂလီ ဆန်တတ်လို့ပါ..
ရုပ်ချော/အောင်မြင် တွေဆို မိုက်ကယ်တို့က အရမ်း ဂျေဝင်တာကလား။
နောက်တစ်ခါ ညည်းဖတ်ချင်အောင် အရှေ့ကျွန်းမှ ဖားတစ်ကောင်ကို မင်းသား ထားရေးမယ်။
ဇာတ်သိမ်းပိုင်းမှ ရိုက်သတ်စားမယ်။ ဟေးဟေးဟေး :::::
ဟိုပုဂ္ဂိုလ်က နေရင်းထိုင်ရင်း ခေါက်ဆွဲနဲ့တောင်
ဒင်းက ရှုပ်တာ မဟုတ်တာမပြုဘဲ ဘာဆိုင်လို့တုန်းရယ်.
ဒါနဲ့ ဗီလိန်ဆိုတာကြီးက ဘိုလိုပါလာရသဒုန်း..
သိဘူးလား… သူလဲ အချိန်ပိုင်းဗီလိန်ပဲလေ…
ခု အချိန်ပြည့် ဗီလိန်ဖြစ်သွားပြီ။
သူ မလွန်မှန်း ပြီးမှ တွေးမိတာပါ။
အဲတုန်းက သူငယ်ချင်းစိတ်မွှန်ပြီး စိတ်ထဲ အစွဲကြီးနဲ့ နားထောင်လိုက်မိတော့ စိတ်ရောလူရော ကြမ်းသွားတာရယ်။
ကျုပ်ကိုဂျီးမတ်ကိုတော့ ဝီစကီလောက်နဲ့ပဲ ပက်မှာပါ။ ခွိခွိခွိ။
ကျုပ်က အဲ သူမ က အစောကြီးသိရဲ့သားနဲ့ လွတ်အောင်မနေနိုင်လို့တဲ့ဗျာ။
အဲဒီအချိန် အဲ့ ဒေသမှာ အဲ့ ပြသနာဟာ မသေးပါဘူး။
ရှင်းရတာလည်း ဝါသနာမပါတော့ နောက်ဆုံး အကြောင်းစုံသိ သဘောပေါက် နားလည်ဖို့ ၆နှစ် စောင့်ခဲ့ရပါတယ်။
ကွန်ပေါ့ဗျာ၊ ကွန်ပေါ့၊ ကွန်တွေကြားထဲ ညပ်ခဲ့တာပေါ့။ လေဘာဒယ်။
( ဒီ ဇာတ်လမ်းမှာ ဗီလိန် တစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့ဖို့ ဆိုလျှင် ၆ နှစ်မပြောနဲ့ နှစ် ၆ဝ သက်သေပြ ဆိုလည်း သူမ ဝန်လေးမည်မဟုတ်ပါ။)
နှစ် ၆ဝ ထိ သက်သေပြရင်တော့ ဒို့များ မမှီလောက်တော့ဘူးကွယ်။ အဟင့် အဟင့် ………….။
ငိုနဲ့ ကိုခ။ တိတ်တိတ်။
ပြသနာက မနှစ်ဦးပိုင်းကတည်းက ပြေလည်သွားပြီ။
နှစ် ၆ဝ မလိုတော့ဘူး။
သူတို့ ဆတ်ဆော့ပြီး ပေးတဲ့ နာမည်တွေ ဆတ်ဆော့ပြီး ယူထားမိလို့ပါ ကိုကြီးမိုက်ရယ်။
နာမည်က ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင် ဆတ်စလူးဝီစကီ လိုဖြစ်နေလို့ ။
ကိုကြီးမိုက် ပြောမှ နာမည်ကို ဝီစကီပဲ ပြောင်းရမလားပဲ။
အမ်… ဘိုဂျီးလဲ..ဘိုဂျီးလဲ.. သူတို့နှစ်ယောက် ဘာဖြစ်သွားလဲ… အစ်မက ဗီလိန်မဟုတ်ပါဝူး.. ဟင့်..ဟင့်.. ပန်းကလေးနေရာကနေ မခံစားနိုင်ဘူး… နိုချင်တယ်.. နိုချင်တယ်…
၂၀၁၁ မှ စိုင်းလင်း လက်ထပ်လိုက်တယ်။ တခြားတစ်ယောက်နဲ့။
ပန်းကလေးက ခုထိ လူလွတ်။
ပန်းကလေးဆိုတာ ဒါ့ပုံမှာ ပေါင်ပေါ်ထိုင်နေတဲ့တစ်ယောက်လား.. :bar:
ကိုယ့် ဝါး ကလေး ကို လွမ်းနေတာ။
me too :528:
ဗီလိန် ဆိုတဲ့ဇတ်ရုပ်က ကျွန်တော်အလွန်နှစ်သက်တာပါ
မကြာသေးခင်ကဘဲ ဒီဆိုက်ထဲမှာ ကျွန်တော်ဗီလီန်ဖြစ်သွားပြီလားမဆိုနိုင်ဘူး
နွားအကြောင်းတွေရေးလို ့လေ
ခုတော့ ဗီလိန်မကလို့ လူဇိုး လူမိုက်လို့ ထင်ထင် မကြောက်တော့ဘူး။
ဒီမှာ တော့ အဲလိုဟုတ်ပါဘူး။ (ထင်တာပဲ)
ဟယ်.. ငါ့မမဆွိ ကိုများရက်ရက်စက်စက် ဘယ့်နှယ် ဗီလိန်ရမှာတုန်းးး မမခိုင်ဇာသိလား ဇာတ်လမ်းလေးတွေ စုထား ကိုယ်တိုင်မင်းသမီးလုပ်ပြီး ရိုက်ပစ်လိုက် အကယ်ဒမီ ရစေရမယ်လို့ အာမခံတယ် ဒါပေမယ့် မင်းတား အချိတေးဒါ ခက်ဒယ် နော
ဗုံကလေး ပြောမှ ကျုပ်နာမည်ကြီးနဲ့ ဗီလိန်နဲ့ တကယ်တွဲမိပါပေါ့။
မင်းသားက ရှိပြီးသားပါ။ ဒီ ဧပြီ ၁ဝ ရက်ကို မွေးနေ့ရှိုးနဲ့ မအားသေးလို့။
ဟယ်.. ဟုတ်သားဘဲ မမဂျီးး အဟီးးး ချိတ်ချိုးနဲ့ ပြန်လာရင် ဝက်သားဒုတ်ထိုးကျွေးမယ် ဟိုလူဂျီးကို ပြောတယ်လို့သဘောထားလိုက် မမဂျီးး အာဘွားး :528:
အဲ… မိုင်ခိ ကိုရော သနားတယ်။ :eee:
အလို … ဘူ့မှဗွီလိန်ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူး
အကုန်လုံးကို သနားထှာာာာာ … (ဆိုးဆန်ဒ်)
သူသူလေးက ကိုယ့်ကို ရော မသနားဘူးလားဟင်။
အိုးးးးးးးးး နည်းနည်းလေးမှကို တနားဘူးအေ
အခု တတ်နိုင်သလောက် ထိန်းပေါ့ကွယ်
အဲဒီ ခေါက်ဆွဲနဲ့ ပက်တာကို ဖတ်တုန်းက
သိကြား ဆုံးမတာ မမေ့နဲ့ သိလား
စိတ်ကို စိတ်နဲ့ အနိုင်ယူကွယ့်
(အခု ပြန်အားပြီနော် )
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် နက်ဖြန်ည တစ်ပွဲရှိတယ်။
ပန်းလေးက အခုထိ လူ လွတ် ဆိုတော့
ရွာထဲ က လူ လွှတ် တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါလား
ရွာ့ အင်အား တိုးလာအောင် စဉ်းစားကြည့်တာပါ
ကိုကြောင်ကြီးကတော့ ဘာ လာ လာ ဒေါင်းမှာပဲ ထင်တယ်
ဪ ..ပေါက်ပြီ ဒီကမိုင်ခိက ဟိုကိုရောက်သွားတာကိုး ..
သူကို်ယ်တိုင်ရဲ့ဇာတ်လမ်းမှာ ဗီလိန်ဖြစ်ခဲ့ရရှာတဲ့ သူငယ်ချင်း
ဘာလိုလိုနဲ့ ရ နှစ်တောင်ရှိတော့မှာပါလား
ကိုယ့်ဇာတ်လမ်းမှာ ကိုယ်ပဲ မင်းသမီးဖြစ်တယ်။
ဪ မမခိုင်ဇာရယ် သဘောတရားအရဗီလိန်ဆိုပေမယ့် နောက်ကွယ်မှာ ကယ်တင်ရှင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လေ
ကိုယ်သာဆို ၂ ဖက်လုံး အဆက်သွယ် ဖြတ်ဖြစ်မလား မသိဘူး
စိတ်ရှုပ်လို့လေ နောင်သွေးအေးမှပဲ ပြန်ခေါ်ပြော
ခု​ခေတ်​​ကောင်​မ​လေး​တွေ အဲ့စရိုက်​​တွေ မကြိုက်​တာ ။ အင်​း​လေ ကိုရီးယားကား​တွေနဲ့ ကိုရီယားကူးချ ရုပ်​ရှင်​ဗီဒီယို​တွေနဲ့ ဝတ္ထု ဇာတ်​လမ်​း​တွေနဲ့ ယဉ်​ပါး​နေ​တော့ အင်​း ဘယ်​သူ့ အပြစ်​​ပြောရမှန်​း​တောင်​မသိ​တော့ဘူးရယ်​ ။။
ဘနီ ဘယ်ကဘယ်လို မျောက်စိလည် လမ်းမှား???